हाम्रो प्रतिश्पर्धी एमाले हो : गजमेर - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क हाम्रो प्रतिश्पर्धी एमाले हो : गजमेर
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकामा नेतृत्व लिन चाहनेहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । राजनीतिक दल आन्तरिक बैठक, भेला तथा प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय नेताले आन्तरिक जोडघटाउ समेत सुरु गरेका छन् । पछिल्लो समय मिक्लाजुङ गाउँ पालिकाको अध्यक्ष को बन्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ । मिक्लाजुङमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीमा अध्यक्षका लागि आन्तरिक दौडधुप चलिरहेको छ ।
यतिबेला पार्टीहरु संस्थागत रुपमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउँदा विजय हासिल गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् भने उम्मे द्वारका आकांक्षी हरु आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन लागि परेका छन् । वर्तमान सरकार सचान लन गर्दै आएको माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मिक्लाजुङका अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्न आन्तरिक दौडधुप तीब्र बनेको छ । माओवादी केन्द्रमा वर्तमान मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको ईन्चार्ज यामबहादुर गजमेरको नाम पनि चर्चामा छ । जनयुद्धबाट नै पार्टीमा आवद्ध उनी पार्टीको एजेन्डालाई पुरा गर्न र स्थानीय स्तरको विकासका निम्ति उम्मेद्वार बन्ने चाहना राखेको बताउँदै आएका छन् ।
आगामी स्थानीय निर्वाचन र उनको उम्मेद्वारीका विषयमा गजमेरसँग गरिएका कुराकानीका केही अंशहरु :-
राजनीतिक यात्रा कसरी सुरु गर्नूभयो ?
- २०५६ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टीमा आवद्ध भएर मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो । २०५७ सालमा जनमुक्ति सेनाको कमान्डर रहेर ईलामको बन्दुके चैकीसम्म पहिलोपटक जनयुद्ध लड्न पुगियो । त्यसपछि मलाई फौजीबाट पार्टीले संगठनमा ल्यायो । २०५८ साल चैत ८ गते म र गोपाल घिमिरे गगनलाई तत्कालिन टाँढी गाविसबाट सुतेको ठाउँमा घेरा हालेर नेपाली सेनाले पक्राउ गर्याे । तर हामी सो समय सेनाको घेरा तोडेर भाग्यौं । सोही क्रममा सेनाको फायरिङका कारण साथी गगनको देहान्त हुनपुग्यो भने म चाँही भाग्न सफल भएँ । यसै क्रममा जनतालाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने ममा भावना जागृत हँुदै गयो । त्यसपछि विभिन्न कमिटीमा बसेर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दै आएको छु ।
तपाई पनि उम्मेद्वार बन्ने कुरा चर्चामा छ ? पार्टीले टिकट दिन्छ ?
- जनयुद्ध कालदेखि नै मैले पार्टीको विभिन्न तह र भूमिकामा रहेर योगदान दिएको छु । पार्टीलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउन साथै संगठन विस्तार गर्दै तत्कालिन टाँडीमा नेकपा माओवादीकोे छुट्टै पहिचान बनाउन समेत मेरो भूमिका अहम् रहेको मैले महसुस गरेको छु । यी सम्पूर्ण पक्षलाई विचार गर्दा मेरो उम्मेद्वारीको चर्चा हुनु अस्वभाविक होईन । पार्टी, पार्टीमा आवद्ध कार्यकर्ता र जनताले चाहेमा पार्टी र जनताका निम्ति उभिन तयार छु ।
यो क्षेत्रमा चुनावी माहोल कस्तो छ त ?
- चुनावी माहोल विस्तारै तात्दै छ । घरदैलो कार्यक्रम चाहिँ गरिएको छैन । तर, व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ भेटघाट बाक्लो बनिरहेको छ । पार्टीले निर्वाचनको तयारीका लागि विभिन्न ठाउँमा दिएको जिम्मेवारी अनुरुप अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र के–के समस्याहरू छन् ?
- यस गाउँपालिकाको मुख्य समस्या भनेको बाटोघाटो नै हो । पूर्व पश्चिमको बाटोमा एकदमै समस्या छ । यस्तै पुल,यातायात , विजुली बत्ती, साप्ताहिक हाट, लगायतलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य समस्याका रुपमा मैले महसुस गरेको छु ।
उम्मेद्वारवार भएर निर्वाचनमा भाग लिँदा कुन–कुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला ?
- हाम्रो एमालेसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
तपाईं अध्यक्ष पदमा उठ्दा के के कुरामा सहज होला ?
- विगतदेखि जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै जनताको वीचमा रहेर काम गर्दै आएकाले स्थानीय बासिन्दाहरुको मन जित्न आफू सफल रहेको मेरो बुझाई छ । त्यसैले जनतासँग सहकार्य गरेर काम गरेकै आधारमा पनि मलाई निर्वाचनमा जान अझ सहज होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।
तपाई पार्टीको कुन–कुन तहमा बसेर काम गरिसक्नुभएको छ ?
- राज्य कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटी सदस्य लगायतका पदमा बसेर मैले पार्टीको काम गरेको छु ।
तपाईंले निर्वाचन जित्ने आधारहरू के–के देख्नुभएको छ ?
- मैले विगतमा पार्टीको काम गरेरै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँन धेरै दुःख गरेको छु । गणतन्त्र स्थापना गरेर माओवादीले देखेको सपना पुरा गर्नका लागी यस क्षेत्रबाट मैले खम्बाको रुपमा काम गरेको छु । स्थानीय सामाजिक तथा विकास निर्माणका समस्या समाधानका बारेमा म दिनहुँ जसो स्थानीय वासीको साथमा बसेर काम गर्दै आएको छु । त्यसैले पार्टीले टिकट दिएमा आउँदो निर्वाचनमा आफू अध्यक्ष पदमा विजयी हुने निश्चित छ । किनभने माओवादी जनयुद्धको सुरुवातदेखि नै मोरङको यस क्षेत्रमा हाम्रा कार्यकर्ताहरुको बाहुल्यता अझैसम्म कायम छ ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विकास गर्न तपाईंले के गर्ने सोच राख्नुभएको छ ?
- गाउँको सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने काम गर्ने , पुल,बाटो, विजुली तथा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीका लागि पहल गर्ने लगायतका काम गरेर जनतालाई लाभान्वित गराउने मेरो सोच छ ।
- नेकपा माओवादी केन्द्र बिना कार्यकर्ताको पार्टी भएको भए यसरी मुलुक नै हल्लाएर हिंड्ने थिएन । हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरु विगतकै जस्तो अटल रहिरहेका छन् । त्यसैले पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा मलाई अध्यक्ष पदमा विजयी गराउनु हुन पार्टी कार्यकर्ता एवम् सम्पूर्ण दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै मेरो भनाई सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभएकोमा राष्टिय समाचार पत्र दैनिकलाई पनि धन्यबाद दिन चाहन्छु ।